အမေရိကန် အမျိုးသားလုံခြုံရေး ပြဿနာ - Kanbawza Tai News
Home ဆောင်းပါး အမေရိကန် အမျိုးသားလုံခြုံရေး ပြဿနာ
အမေရိကန် အမျိုးသားလုံခြုံရေး ပြဿနာ
December 21, 2019 ဆောင်းပါး,
အမေရိကန်၏ အိမ်နီးချင််း မက္ကဆီကိုနိုင်ငံတွင် မူးယစ်ဆေး ဝါးဂိုဏ်းများသည် တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ အင်အားပိုမိုကြီးထွား လာပြီး ယင်းတို့ကြောင့် နေ့စဉ်လိုလိုပင် လူသားအများအပြားတို့ သေဆုံးလျက်ရှိနေကြသည်။ မကြာသေးမီကာလကပင် အမေ ရိကန်နယ်စပ်မှ မိုင် ၁၀၀ ပင်မကွာသည့် မက္ကဆီကိုမြို့တစ်မြို့ တွင် အမေရိကန် မက္ကဆီကို ၂ နိုင်ငံသားခံယူထားသည့် မော် မွန် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ၉ ဦးတို့သည် မူးယစ်ဂိုဏ်းတစ်ခု၏ တိုက်ခိုက်သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
အမေရိကန် အစိုးရနှင့် သတင်းမီဒီယာများသည် ဆီးရီး ယားပြည်တွင်းစစ်နှင့် အရှေ့အလယ်ပိုင်း ဒေသမှ စစ်သွေးကြွ များ၏ အကြောင်းအရင်းကိုသာ အလေးထားပြီး မက္ကဆီကိုမူး ယစ်ဆေးဝါးဂိုဏ်းများကို အလေးဂရုမပြုသည်ကို တွေ့ရှိနေရ ပါသည်။ မက္ကဆီကိုမူးယစ်ဆေးဝါးဂိုဏ်းများသည် ပိုမို၍အင် အားကောင်းမွန်လာကာ ဆိုးသွမ်းရက်စက်မှုကလည်း ကြောက် ခမန်းလိလိ ဖြစ်လာသဖြင့် ယင်းတို့အား အလေးထားပြီး နှိမ်နှင်း မှု မပြုပါက အမေရိကန်အမျိုးသား လုံခြုံရေးကိုပင် ခြိမ်းခြောက် လာနိုင်ပေသည်။
အဆုံးစွန် ဆိုရလျှင် မက္ကဆီကိုမူးယစ်ဆေး ဂိုဏ်းတစ်ခု ကြောင့် လွန်ခဲ့သော ၂၀၁၁ ခုနှစ် သမ္မတအိုဘားမား လက်ထက် ၌ ပြင်းထန်သော အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် အမေရိကန် နှင့် အီရန်တို့ စစ်ဖြစ်ရလုနီးပါး အနေအထားသို့ ရောက်ရှိခဲ့ သည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် အမေရိ ကန်အစိုးရရှေ့နေချုပ် ဟိုးလ်ဒါးနှင့် FBI ညွှန်ကြားရေးမှူး ရောက်မူလာတို့သည် အမေရိကန်နိုင်ငံဆိုင်ရာ ဆော်ဒီသံအ မတ်ကြီး အယ်လ်ဂျူဘေယာအား လုပ်ကြံမည့် အစီအစဉ်ကို ဖြိုခွင်းလိုက်ရသည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။ ထိုလုပ်ကြံမှုတွင် သံ သယရှိသူတစ်ဦးဖြစ်သော အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဘာအတ်ဇီ ယာကို ဖမ်းမိသည် ထို့နောက် သံသယရှိသော အီရန်တော်လှန် ရေး အစောင့်တပ်ဖွဲ့မှ ကူညီသည့်တွက် ဘေးလွတ်မြောက်သွား ခဲ့သည်။
သံအမတ်ကြီးအား လုပ်ကြံပြီး ၉/၁၁ ဖြစ်ရပ်နောက်ပိုင်း တွင် လွန်စွာဆိုးရွားသော အကြမ်းဖက်မှုပြုလုပ်ရန် ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လကတည်းကပင် ကြံစည်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည် ဟူ၍ တ ရားရေးဌာနမှဆိုသည်။ ဘာအတ်ဇီယာသည် မက္ကဆီကိုသို့ သွားရောက်ကာ မူးယစ်ဆေးဝါးဂိုဏ်းတစ်ဦးကို ငှားရမ်းခဲ့သည်။ သို့သော် ထိုမူးယစ်ဂိုဏ်းသားသည် အမေရိကန်မူးယစ်ဆေး တိုက်ဖျက်ရေး အေဂျင်စီ၏ သတင်းပေးသူလျှိုဖြစ်သည့်အတွက် အစီအစဉ်များပျက်ပြားခဲ့ရသည်။
ဘာအတ်ဇီယာသည် ဆော်ဒီသံအမတ်ကြီးအား သတ် ဖြတ်ရန်သို့မဟုတ် အမေရိကန် ဆော်ဒီသံရုံးကို ဗုံးခွဲတိုက်ဖျက် ရန် အမေရိကန်အစိုးရက သူလျှိုမူးယစ်ဆေးဝါးဂိုဏ်းသားနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခဲ့သည်။ ဘာအတ်ဇီယာသည် မည်သည့် ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများကို အသုံးပြုနိုင်သနည်းဟု မေးမြန်းရာ သတင်းပေးသူလျှိုက C-4 ပလတ်စတစ်ဗုံးများ ရနိုင်ကြောင်း ပြန်လည်ပြောကြားခဲ့သည်။
ဘာအတ်ဇီယာသည် ထိုနှစ်ထဲတွင် မက္ကဆီကို၌ မူးယစ် ဆေးဝါးဂိုဏ်းသား အမေရိကန်သူလျှိုနှင့် အကြိ်မ်ကြိမ်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ လုပ်ကြံတိုက်ခိုက်သည့် အစီအစဉ်ကို အီရန် တော်လှန်ရေး အစောင့်တပ်ဖွဲ့မှ ကြိုးကိုင်ခြင်းဖြစ်သည် ဟု လည်း ဖွင့်ဟပြောဆိုခဲ့သည်။ ထိုအခါ အမေရိကန်သူလျှိုက ဒေါ်လာ တစ်သန်းခွဲရရှိမည်ဆိုပါက လုပ်ကြံတိုက်ခိုက်မှုများကို ကျူးလွန်ပေးရန် မိမိတို့မူးယစ်ဆေးဝါးဂိုဏ်းက စိတ်ဝင်စား ကြောင်း ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်။
သတင်းပေးသူလျှိုက မြို့တော်ဝါရှင်တန်ဒီစီတွင် မိမိတို့မူး ယစ်ဆေးဝါးဂိုဏ်းသား တစ်ဦးရှိသည့်အတွက် ဆော်ဒီသံအ မတ်ကြီး၏ သွားလာလှုပ်ရှားမှု ဟူသ၍အား စောင့်ကြည့်ပေးနိုင် ကြောင်း၊ ၎င်းသည် အီတလီစားသောက်ဆိုင် တစ်ခုတွင် ထိုင် လေ့ရှိကြောင်း ထိုနေရာသည် လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုအတွက် အသင့်လျော်ဆုံးသော နေရာဖြစ်သည်ဟု ဘာအတ်ဇီယာသို့ ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဘာအတ်ဇီယာက လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မှုတွင် အခြားသော အရပ်သားများအား သေဆုံးမှုမရှိစေရေးအတွက် အထူးဂရုစိုက် ရန်ပြောဆိုခဲ့သည်။ သို့သော်နောက်ပိုင်းတွင် လူသားမည်မျှပင် သေပါစေ၊ သံအမတ်ကြီးအား မဖြစ်မနေသုတ်သင်ရန် အထူးအ ရေးကြီးသည်ဟု ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။ သူတို့ (အီရန်) အစိုးရက သံအမတ်ကြီးကို အမြန်ဆုံးသေစေချင်တယ်၊ အရပ် သားရာနဲ့ချီပြီး သေချင်သေပါစေ သူ့ကိုရှင်းပစ်လိုက်တော့ဟူ၍ ဘာအတ်ဇီယာကပြောဆိုညွှန်ကြားမှုကို သတင်းပေး အမေရိ ကန်သူလျှိုက အသံသွင်းဖမ်းယူနိုင်ခဲ့သည်။
မက္ကဆီကို မူးယစ်ဆေးဝါးဂိုဏ်းအနေဖြင့် ဖြစ်နိုင်ပါက သံ အမတ်ကြီးအား စားသောက်ဆိုင်အပြင်ဘက်တွင် တစ်ဦးတည်း လုပ်ကြံနိုင်ရန် ကြိုးစားရမည်ဖြစ်သော်လည်း လိုအပ်ပါက သံ အမတ်ကြီးမှ ညစာစားသုံးနေစဉ်၌ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုလုံး အား ဗုံးခွဲပစ််နိုင်သည်ဟုလည်း ဘာအတ်ဇီယာမှ ဆက်လက် ပြောဆိုခဲ့သည်။ ထိုအခါ အမေရိကန်သတင်းပေး သူလျှိုက စား သောက်ဆိုင်ထဲတွင် လူအယောက် ၁၀၀ မှ ၁၅၀ အထိ ရှိနိုင် ကြောင်း ထိုအထဲတွင် အထက်လွှတ်တော်အမတ်များလည်း ပါဝင်နိုင်သေးကြောင်း သတိပေးခဲ့သော်လည်း ဘာအတ်ဇီယာ က အဲ့ဒါတွေဂရုစိုက်စရာမလိုကြောင်း ပြန်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် သြဂုတ်လထဲတွင် ဘာအတ်ဇီယာသည် မူး ယစ်ဆေးဝါးဂိုဏ်းအား စရံငွေအဖြစ် ဒေါ်လာ တစ်သိန်းတိတိ ငွေလွဲပေးခဲ့သည်။ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်မည့် အချိန်ကိုလည်း အောက်တိုဘာလဟူ၍ သဘောတူခဲ့ကြသည်။ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်တွင် ဘာအတ်ဇီယာသည် မက္ကဆီကိုသို့သွားကာ ခိုင်း စေခဒေါ်လာ တစ်သိန်းခွဲအတွက် အာမခံအတွက် မူးယစ်ဆေး ဝါးဂိုဏ်းထဲတွင် အထိန်းသိမ်းခံရန် စီစဉ်ခဲ့သည်။
သို့သော် မက္ကဆီကိုသို့ လေယာဉ်ဆိုက်ရောက်သောအခါ တွင် မက္ကဆီကိုအာဏာပိုင်များမှ ဘာအတ်ဇီယာအား ပြည်ဝင် ခွင့် ပေးခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ ၎င်းသည် နယူးယောက်သို့ လေယာဉ်ဖြင့် ပြန်ရောက်လာသောအခါ၌ အမေရိကန်အာဏာပိုင်များက ဖမ်း ဆီးခဲ့သည်။
အီရန်တော်လှန်ရေး အစောင့်တပ်ဖွဲ့မှ ရှာကူရီ
ဘာအတ်ဇီယာသည် မိမိဆက်သွယ်ချဉ်းကပ်ခဲ့သည့် မက္က ဆီကိုမူးယစ်ဆေးဂိုဏ်းသားသည် အမေရိကန်အစိုးရ သူလျှို ဖြစ်နေသောကြောင့် ဘာအတ်ဇီယာသည် ချက်ချင်းဆိုသလိုပင် ဖြောင့်ချက်ပေး ဝေဖန်ခံခဲ့သည်။ ထို့ပြင်မိမိအား စေခိုင်းသူ အီ ရန်တော်လှန်ရေး အစောင့်တပ်ဖွဲ့မှ ရှာကူရီအား အမှုဖွင့်ဖမ်းဆီး နိုင်ရန်လည်း FBI နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ရှာကူရီသည် အမေရိကန်အစိုးရက မကြေညာမီအထိ ဘာအတ်ဇီယာသည် အဖမ်းခံထားရကြောင်း သိရှိခြင်းမရှိခဲ့ချေ။ သို့သော်အမေရိကန် အာဏာပိုင်သည် ရှာကူရီအားယနေ့ထက်တိုင် ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိသေးပါ။
သံအမတ်ကြီးအား လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ရန် ဘာအတ်ဇီယာ မှ ချဉ်းကပ်ဆက်သွယ်ခဲ့သော မက္ကဆီကို မူးယစ်ဆေးဝါးဂိုဏ်း ၏ အမည်ကိုကား အမေရိကန်အစိုးရမှ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမ ရှိခဲ့ပေ။ သို့သော်ထိုမူးယစ်ဆေးဝါးဂိုဏ်းသည် အင်အားတောင့် တင်းပြီး အဆင့်အတန်းမြင့်မားကာ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သည်။ မြောက်အမေရိကတိုက် တစ်တိုက်လုံးတွင် ထင်ရှားကြော်ကြား ပြီး မက္ကဆီကိုနိုင်ငံနှင့် အမေရိကန်တို့၌ မှောင်ခိုလုပ်ငန်းများကို အဓိကဆောင်ရွက်နေသည်။ အဆိုပါ နံပါတ်တစ် မူးယစ်ဆေး ဝါးဂိုဏ်းသည် စစ်တပ်သုံးလက်နက်နှင့် ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများ ကိုပင် အသုံးပြုနိုင်စွမ်းရှိပြီး လုပ်ကြံမှု၊ ဒသတ်ဖြတ်မှု၊ တိုက်ခိုက် မှုများ အများအပြားကို ကျူးလွန်ထားသည်ဟု အမေရိကန်အ စိုးရ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်က ဆိုသည်။
အီရန်သည် ဆော်ဒီသံအမတ်ကြီးအား ဗုံးခွဲလုပ်ကြံမည့် အစီအစဉ် အောင်မြင်မှုပျက်ပြားခဲ့သော်လည်း ထိုကဲ့သို့သော မက္ကဆီကိုမူးယစ်ဆေးဝါးဂိုဏ်းများအား အသုံးချကာ အမေရိ ကန်ပြည်တွင်းတွင် ထပ်မံ၍ပြုလုပ်လာနိုင်ချေရှိနေသည် ထို့ ကြောင့် မက္ကဆီကို မူးယစ်ဆေးဝါးဂိုဏ်းများသည် အယ်ကိုင်ဒါ နှင့် IS အဖွဲ့ထက်ပင် အမေရိကန်အား ခြိမ်းခြောက်လာသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် ဆော်ဒီသံအမတ်ကြီးအား ဗုံးခွဲလုပ်ကြံ မည့်အစီအစဉ်အား ဟန့်တားနိုင်မှုမရှိခဲ့ပါက အီရန်၏လက်ချက် ဖြစ်ကြောင်း ပေါ်ပေါက်လာမည်ဆိုပါက အမေရိကန်နှင့် အီရန် သည် စစ်ပွဲခင်းရမည့် အခြေအနေသို့ပင် ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ထို့ ပြင် ထိုလုပ်ကြံမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါက သမ္မတအိုဘားမား၏ အီရန် နှင့် နယူကလီးယားအရေး ဆွေးနွေးမှုများလည်း ပျက်ပြားသွား မည်ဖြစ်သည်။ ၂၀၁၅ နျူကလီးယား သဘောတူညီချက်သာ မရခဲ့ပါက အမေရိကန်သည် အီရန်အား စစ်ရေးအရ အရေးယူ နိုင်ချေများစွာ ဖြစ်တည်ခဲ့သည်။
သမ္မတအိုဘားမားသည် အီရန်အား များစွာအလျှော့ပေး ဆက်ဆံခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် ဆော်ဒီသံအမတ်ကြီးအား ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်မှုသာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါက အိုဘားမားကို ပျော့ညံ့သူဟူ ၍ နိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်များက ဝေဖန်အပြစ်တင်ကြပေမည်။ ထို အခါ အိုဘားမားသည် ဒုတိယအကြိမ် သမ္မတအဖြစ် ရွေး ကောက်ခံရဖွယ်မရှိပါ။
အိုဘားမားသည် သဘောထားပျော့ပျောင်းသူ ဖြစ်သော ကြောင့် ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုပင် ရရှိခဲ့သော်လည်း သံအမတ် ကြီးအား ဗုံးခွဲလုပ်ကြံမှုသာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါက အိုဘားမားသည် သဘောထားတင်းမာသူ ဖြစ်လာနိုင်ချေလည်းရှိသည်။ သမ္မတ ဘုရ်ုသည် ၉/၁၁ တိုက်ခိုက်မှုကို ပြင်းထန်စွာဆောင်ရွက်တုံ့ပြန် ခဲ့သကဲ့သို့ အိုဘားမားလည်းအီရန်အား တိုက်ခိုက်ရန်အမိန့် ပေးပြီး သဘောထားတင်းမာသူတစ်ဦး ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် အီရန်သည် နျူကလီးယားဗုံးထုတ်လုပ်ရန် နီးစပ်သည့် အခြေအနေသို့ရောက်ရှိခဲ့ရာ အနောက်နိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံရေးတင်းမာခဲ့ရသည်။ အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်နှင့် ပြင်သစ် တပ်ဖွဲ့များသည် ပင်လယ်ကွေ့သို့ပင်သွားရောက်ကာ အီရန်ကို စစ်ရေးအရ အရေးယူရန် အသင့်အနေအထားသို့ပင် ရှိနေခဲ့ သည်။ အစ္စရေးသည်လည်း အီရန်၏ နျူကလီးယားစခန်းများ အား ဗုံးကြဲတိုက်ခိုက်ရန် အလေးအနက်ပင်ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခဲ့ ကြသည်။ အဆိုပါအခြေအနေတွင် ဆော်ဒီသံအမတ်ကြီးအား အီရန်၏ လုပ်ကြံမှုသာ အောင်မြင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါက ကမ္ဘာ့ သမိုင်းသည်လည်း အကြီးအကျယ် ပြောင်းလဲသွားနိုင်ချေ ရှိနေသည်။
မက္ကဆီကိုတွင် မူးယစ်ဆေးဝါးဂိုဏ်းများသည် အစိုးရကို ပင် ဂရုမစိုက် အလေးမမူသည့် အနေအထားထိ အင်အား တောင့်တင်းနေကြသည်။ အမေရိကန်အစိုးရအနေဖြင့် အိမ်နီး ချင်း မက္ကဆီကိုမှ မူးယစ်ဆေးဝါးဂိုဏ်းများကို အလေးထားသင့် ပြီး ၎င်းတို့ကို လျစ်လျူရှုထားပါက တစ်ချိန်ချိန်တွင် ၎င်းတို့သည် အမေရိကန်အမျိုးသား လုံခြုံရေးကိုပါ ထိခိုက်စေလိမ့်မည်ဖြစ် သည်။
တောင်ကြီးမြို့၊ စဝ်စံထွန်းဆေးရုံတွင် သံဃာတစ်ပါးနှင့် အမျိုးသားတစ်ဦးတို့အား COVID-19 နှင့် ပတ်သက်၍ စောင့်ကြည့်နေ
ကမ္ဘောဇတိုင်း . ရှမ်းပြည်နယ်မြို့တော်၊ တောင်ကြီးမြို့ရှိ စဝ်စံထွန်းဆေးရုံတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာသည့် သံဃာ တစ်ပါးနှ...
အနက်ရောင် ဆိုင်ကယ်လေး တစ်စင်းနှင့် သူတို့ကို ဘယ်မှာ ရှာရမလဲ
တိုက်မောင်း . ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ရုံးပိတ်ရက်တွေမှာ နားရတယ်လို့ မရှိပါဘူး။ အစိုးရရုံးလုပ်ငန်း တွေကြောင့်တော့ မဟုတ်။ စ နေ၊ တနင်္...
ဘေးအန္တရာယ် ကင်း‌ဝေးစေဖို့အတွက် မြို့တော် တောင်ကြီးမှာ ပရိတ်ရွတ်ဖတ် ပူဇော်မှုတွေ ပြုလုပ်
မင်းဇော်မင်း . ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ မိုင်းဆတ်ခရိုင်၊ မိုင်းတုံမြို့နယ်တွင် မတ်လ ၂၅ ရက်က တပ်မတော်တပ်ရင်းအချို့နှင့် RCSS လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွ...
Archive Mar 29 (9) Mar 28 (15) Mar 27 (18) Mar 26 (17) Mar 25 (12) Mar 24 (13) Mar 23 (10) Mar 22 (8) Mar 21 (10) Mar 20 (13) Mar 19 (13) Mar 18 (9) Mar 17 (13) Mar 16 (9) Mar 15 (9) Mar 14 (7) Mar 13 (11) Mar 12 (14) Mar 11 (5) Mar 10 (8) Mar 09 (9) Mar 08 (7) Mar 07 (7) Mar 06 (15) Mar 05 (10) Mar 04 (6) Mar 03 (5) Mar 02 (8) Mar 01 (8) Feb 29 (5) Feb 28 (9) Feb 27 (10) Feb 26 (7) Feb 25 (9) Feb 24 (10) Feb 23 (4) Feb 22 (8) Feb 21 (9) Feb 20 (10) Feb 19 (9) Feb 18 (8) Feb 17 (7) Feb 16 (7) Feb 15 (11) Feb 14 (8) Feb 13 (15) Feb 12 (1) Feb 11 (7) Feb 10 (12) Feb 09 (7) Feb 08 (3) Feb 07 (9) Feb 06 (9) Feb 05 (13) Feb 04 (4) Feb 03 (7) Feb 02 (12) Feb 01 (9) Jan 31 (10) Jan 30 (9) Jan 29 (11) Jan 28 (9) Jan 27 (8) Jan 26 (8) Jan 25 (5) Jan 24 (10) Jan 23 (11) Jan 22 (11) Jan 21 (11) Jan 20 (8) Jan 19 (6) Jan 18 (4) Jan 17 (5) Jan 16 (16) Jan 15 (11) Jan 14 (10) Jan 13 (10) Jan 12 (6) Jan 11 (8) Jan 10 (3) Jan 09 (6) Jan 08 (11) Jan 07 (2) Jan 06 (7) Jan 05 (8) Jan 04 (10) Jan 03 (10) Jan 02 (12) Jan 01 (11) Dec 31 (4) Dec 30 (8) Dec 29 (6) Dec 28 (10) Dec 27 (6) Dec 26 (11) Dec 25 (9) Dec 24 (7) Dec 23 (5) Dec 22 (4) Dec 21 (7) Dec 20 (10) Dec 19 (12) Dec 18 (6) Dec 17 (3) Dec 16 (11) Dec 15 (11) Dec 14 (12) Dec 13 (10) Dec 12 (1) Dec 11 (8) Dec 10 (6) Dec 09 (4) Dec 08 (6) Dec 07 (7) Dec 06 (11) Dec 05 (11) Dec 04 (9) Dec 03 (7) Dec 02 (5) Dec 01 (4) Nov 30 (7) Nov 29 (10) Nov 28 (9) Nov 27 (7) Nov 26 (6) Nov 25 (5) Nov 24 (7) Nov 23 (6) Nov 22 (8) Nov 21 (8) Nov 20 (7) Nov 19 (3) Nov 18 (5) Nov 17 (7) Nov 16 (6) Nov 15 (5) Nov 14 (6) Nov 13 (6) Nov 11 (1) Nov 10 (1) Nov 09 (6) Nov 08 (8) Nov 07 (4) Nov 06 (4) Nov 05 (3) Nov 04 (4) Nov 03 (5) Nov 02 (2) Nov 01 (5) Oct 31 (7) Oct 30 (6) Oct 29 (4) Oct 28 (3) Oct 27 (8) Oct 26 (4) Oct 25 (5) Oct 24 (13) Oct 23 (6) Oct 22 (7) Oct 21 (1) Oct 20 (7) Oct 19 (6) Oct 18 (9) Oct 17 (5) Oct 16 (5) Oct 15 (2) Oct 14 (6) Oct 13 (9) Oct 12 (3) Oct 11 (7) Oct 10 (7) Oct 09 (11) Oct 08 (7) Oct 07 (6) Oct 06 (2) Oct 05 (9) Oct 04 (5) Oct 03 (14) Oct 02 (8) Oct 01 (9) Sep 30 (4) Sep 29 (8) Sep 28 (8) Sep 27 (8) Sep 25 (15) Sep 24 (9) Sep 23 (3) Sep 22 (6) Sep 21 (10) Sep 20 (10) Sep 19 (9) Sep 18 (10) Sep 17 (7) Sep 16 (5) Sep 15 (7) Sep 14 (10) Sep 13 (8) Sep 12 (10) Sep 11 (10) Sep 10 (9) Sep 09 (5) Sep 08 (9) Sep 07 (7) Sep 06 (8) Sep 05 (12) Sep 04 (11) Sep 03 (8) Sep 02 (4) Sep 01 (4) Aug 31 (8) Aug 30 (9) Aug 29 (12) Aug 28 (11) Aug 27 (8) Aug 26 (9) Aug 25 (8) Aug 24 (9) Aug 23 (9) Aug 22 (15) Aug 21 (7) Aug 20 (6) Aug 19 (6) Aug 18 (13) Aug 17 (8) Aug 16 (11) Aug 15 (2) Aug 14 (7) Aug 13 (4) Aug 12 (8) Aug 11 (7) Aug 10 (9) Aug 09 (7) Aug 08 (10) Aug 07 (9) Aug 06 (5) Aug 05 (8) Aug 04 (8) Aug 03 (7) Aug 02 (12) Aug 01 (15) Jul 31 (6) Jul 30 (12) Jul 29 (6) Jul 28 (11) Jul 27 (10) Jul 26 (13) Jul 25 (13) Jul 24 (11) Jul 23 (9) Jul 22 (5) Jul 21 (14) Jul 20 (15) Jul 19 (11) Jul 18 (8) Jul 17 (9) Jul 16 (9) Jul 15 (10) Jul 14 (12) Jul 13 (11) Jul 12 (13) Jul 11 (13) Jul 10 (6) Jul 09 (3) Jul 08 (4) Jul 07 (6) Jul 06 (8) Jul 05 (7) Jul 04 (4) Jul 03 (5) Jul 02 (3) Jul 01 (2) Jun 28 (3) Jun 27 (8) Jun 26 (5) Jun 25 (6) Jun 24 (4) Jun 23 (5) Jun 22 (2) Jun 21 (6) Jun 20 (10) Jun 19 (8) Jun 18 (10) Jun 17 (2) Jun 15 (6) Jun 14 (2) Jun 13 (4) Jun 12 (5) Jun 11 (3) Jun 10 (4) Jun 08 (5) Jun 07 (7) Jun 06 (5) Jun 05 (3) Jun 04 (3) Jun 03 (5) Jun 02 (3) May 31 (4) May 30 (10) May 29 (8) May 28 (7) May 27 (2) May 26 (1) May 25 (5) May 24 (5) May 23 (7) May 22 (6) May 21 (5) May 19 (4) May 18 (13) May 17 (3) May 16 (9) May 15 (10) May 14 (7) May 13 (6) May 12 (5) May 11 (7) May 10 (1) May 09 (5) May 08 (3) May 07 (5) May 06 (5) May 05 (6) May 04 (4) May 03 (3) May 02 (9) May 01 (9) Apr 30 (7) Apr 29 (7) Apr 28 (3) Apr 27 (7) Apr 26 (9) Apr 25 (10) Apr 24 (7) Apr 23 (1) Apr 22 (8) Apr 21 (4) Apr 20 (3) Apr 19 (4) Apr 18 (7) Apr 17 (7) Apr 15 (6) Apr 14 (2) Apr 13 (5) Apr 12 (5) Apr 11 (8) Apr 10 (7) Apr 09 (5) Apr 08 (6) Apr 07 (1) Apr 06 (7) Apr 05 (6) Apr 04 (9) Apr 03 (6) Apr 02 (8) Mar 31 (6) Mar 30 (5) Mar 29 (7) Mar 28 (8) Mar 27 (7) Mar 26 (11) Mar 25 (6) Mar 24 (4) Mar 23 (9) Mar 22 (4) Mar 21 (4) Mar 20 (9) Mar 19 (9) Mar 18 (6) Mar 17 (4) Mar 16 (5) Mar 15 (12) Mar 14 (11) Mar 13 (8) Mar 12 (5) Mar 11 (10) Mar 10 (4) Mar 09 (11) Mar 08 (8) Mar 07 (13) Mar 06 (3) Mar 05 (4) Mar 04 (6) Mar 03 (1) Mar 02 (2) Mar 01 (10) Feb 28 (11) Feb 26 (5) Feb 25 (5) Feb 24 (11) Feb 23 (2) Feb 22 (9) Feb 21 (4) Feb 20 (4) Feb 19 (4) Feb 18 (3) Feb 17 (7) Feb 16 (11) Feb 15 (5) Feb 14 (8) Feb 13 (12) Feb 12 (8) Feb 11 (8) Feb 10 (1) Feb 09 (8) Feb 08 (9) Feb 07 (10) Feb 06 (11) Feb 05 (7) Feb 04 (8) Feb 03 (4) Feb 02 (9) Feb 01 (6) Jan 31 (8) Jan 30 (6) Jan 29 (4) Jan 28 (6) Jan 27 (5) Jan 26 (6) Jan 25 (6) Jan 24 (14) Jan 23 (9) Jan 22 (7) Jan 21 (5) Jan 20 (6) Jan 19 (12) Jan 18 (9) Jan 17 (10) Jan 16 (6) Jan 15 (5) Jan 14 (6) Jan 13 (4) Jan 12 (5) Jan 11 (9) Jan 10 (10) Jan 09 (6) Jan 08 (6) Jan 07 (7) Jan 06 (6) Jan 05 (7) Jan 04 (8) Jan 03 (12) Jan 02 (11) Dec 31 (13) Dec 30 (8) Dec 29 (10) Dec 28 (7) Dec 27 (11) Dec 26 (3) Dec 25 (10) Dec 24 (14) Dec 23 (5) Dec 22 (7) Dec 21 (7) Dec 20 (9) Dec 19 (7) Dec 18 (5) Dec 17 (7) Dec 16 (3) Dec 15 (6) Dec 14 (12) Dec 13 (10) Dec 12 (7) Dec 11 (17) Dec 10 (12) Dec 09 (5) Dec 08 (6) Dec 07 (10) Dec 06 (14) Dec 05 (8) Dec 04 (5) Dec 03 (10) Dec 02 (6) Dec 01 (11) Nov 30 (10) Nov 29 (8) Nov 28 (12) Nov 27 (2) Nov 26 (8) Nov 25 (5) Nov 24 (5) Nov 23 (4) Nov 22 (1) Nov 21 (18) Nov 20 (10) Nov 19 (8) Nov 18 (2) Nov 17 (8) Nov 16 (17) Nov 15 (11) Nov 14 (5) Nov 13 (2) Nov 12 (3) Nov 11 (9) Nov 10 (15) Nov 09 (12) Nov 08 (5) Nov 07 (3) Nov 06 (5) Nov 05 (6) Nov 04 (2) Nov 03 (8) Nov 02 (7) Nov 01 (8) Oct 30 (9) Oct 29 (10) Oct 28 (7) Oct 27 (8) Oct 26 (10) Oct 25 (3) Oct 24 (5) Oct 23 (8) Oct 22 (6) Oct 21 (3) Oct 20 (5) Oct 19 (4) Oct 18 (12) Oct 17 (5) Oct 16 (11) Oct 15 (8) Oct 14 (5) Oct 13 (10) Oct 12 (12) Oct 11 (13) Oct 10 (3) Oct 09 (7) Oct 08 (5) Oct 07 (4) Oct 06 (3) Oct 05 (6) Oct 04 (16) Oct 03 (4) Oct 02 (6) Oct 01 (6) Sep 30 (2) Sep 29 (8) Sep 28 (8) Sep 27 (8) Sep 26 (9) Sep 25 (9) Sep 24 (6) Sep 23 (4) Sep 22 (10) Sep 21 (4) Sep 20 (5) Sep 19 (14) Sep 18 (13) Sep 17 (10) Sep 15 (1) Sep 14 (9) Sep 13 (1) Sep 12 (9) Sep 11 (5) Sep 10 (6) Sep 09 (5) Sep 08 (6) Sep 07 (8) Sep 06 (8) Sep 05 (6) Sep 04 (8) Sep 03 (10) Sep 02 (4) Sep 01 (7) Aug 31 (11) Aug 30 (9) Aug 29 (11) Aug 28 (4) Aug 27 (7) Aug 26 (4) Aug 25 (6) Aug 24 (7) Aug 23 (10) Aug 22 (10) Aug 21 (8) Aug 20 (6) Aug 19 (8) Aug 18 (9) Aug 17 (16) Aug 16 (10) Aug 15 (1) Aug 14 (9) Aug 13 (6) Aug 12 (5) Aug 11 (12) Aug 10 (13) Aug 09 (16) Aug 08 (6) Aug 07 (9) Aug 06 (5) Aug 05 (9) Aug 04 (13) Aug 03 (11) Aug 02 (15) Aug 01 (8) Jul 31 (7) Jul 30 (3) Jul 29 (8) Jul 28 (12) Jul 27 (10) Jul 26 (14) Jul 25 (7) Jul 24 (5) Jul 23 (7) Jul 22 (5) Jul 21 (12) Jul 20 (12) Jul 19 (5) Jul 18 (6) Jul 17 (4) Jul 16 (9) Jul 15 (1) Jul 14 (3) Jul 13 (5) Jul 12 (13) Jul 11 (6) Jul 10 (5) Jul 09 (10) Jul 08 (3) Jul 07 (13) Jul 06 (12) Jul 05 (13) Jul 03 (12) Jul 02 (5) Jun 30 (11) Jun 29 (9) Jun 28 (13) Jun 27 (2) Jun 26 (1) Jun 25 (7) Jun 24 (6) Jun 23 (12) Jun 22 (12) Jun 21 (15) Jun 20 (6) Jun 19 (3) Jun 18 (10) Jun 17 (4) Jun 16 (5) Jun 15 (8) Jun 14 (12) Jun 13 (9) Jun 12 (4) Jun 11 (8) Jun 10 (4) Jun 09 (7) Jun 08 (17) Jun 07 (13) Jun 06 (9) Jun 05 (8) Jun 04 (5) Jun 03 (5) Jun 02 (6) Jun 01 (10) May 31 (6) May 30 (4) May 28 (13) May 26 (7) May 25 (3) May 24 (8) May 23 (8) May 22 (10) May 21 (6) May 20 (6) May 19 (6) May 18 (7) May 17 (16) May 16 (8) May 15 (10) May 14 (10) May 13 (7) May 12 (7) May 11 (6) May 10 (15) May 09 (7) May 08 (11) May 07 (4) May 06 (5) May 05 (4) May 04 (6) May 03 (13) May 02 (5) May 01 (5) Apr 30 (19) Apr 29 (4) Apr 28 (8) Apr 27 (8) Apr 26 (14) Apr 25 (6) Apr 24 (11) Apr 23 (9) Apr 22 (3) Apr 21 (4) Apr 20 (7) Apr 19 (9) Apr 17 (5) Apr 16 (1) Apr 14 (3) Apr 13 (7) Apr 12 (11) Apr 11 (6) Apr 10 (10) Apr 09 (5) Apr 08 (6) Apr 07 (7) Apr 06 (8) Apr 05 (11) Apr 04 (11) Apr 03 (9) Apr 02 (7) Apr 01 (6) Mar 31 (8) Mar 30 (11) Mar 29 (8) Mar 28 (11) Mar 27 (9) Mar 26 (8) Mar 25 (6) Mar 24 (8) Mar 23 (15) Mar 22 (8) Mar 21 (7) Mar 20 (11) Mar 19 (11) Mar 18 (5) Mar 17 (9) Mar 16 (15) Mar 15 (12) Mar 14 (10) Mar 13 (15) Mar 12 (8) Mar 11 (5) Mar 10 (13) Mar 09 (6) Mar 08 (13) Mar 07 (10) Mar 06 (11) Mar 05 (9) Mar 04 (8) Mar 03 (9) Mar 01 (6) Feb 28 (11) Feb 27 (15) Feb 26 (14) Feb 25 (4) Feb 24 (10) Feb 23 (9) Feb 22 (14) Feb 21 (11) Feb 20 (16) Feb 19 (11) Feb 18 (6) Feb 17 (10) Feb 16 (13) Feb 15 (14) Feb 14 (9) Feb 13 (12) Feb 12 (11) Feb 11 (7) Feb 10 (8) Feb 09 (10) Feb 08 (15) Feb 07 (11) Feb 06 (6) Feb 05 (5) Feb 04 (6) Feb 03 (4) Feb 02 (7) Feb 01 (10) Jan 31 (9) Jan 30 (4) Jan 29 (8) Jan 27 (10) Jan 26 (11) Jan 25 (9) Jan 24 (7) Jan 23 (9) Jan 22 (8) Jan 21 (5) Jan 20 (8) Jan 19 (6) Jan 18 (10) Jan 17 (10) Jan 16 (6) Jan 15 (15) Jan 14 (8) Jan 13 (6) Jan 12 (10) Jan 11 (11) Jan 10 (13) Jan 09 (9) Jan 08 (1) Jan 07 (5) Jan 06 (8) Jan 05 (9) Jan 04 (8) Jan 03 (8) Jan 02 (5) Jan 01 (8) Dec 31 (3) Dec 30 (4) Dec 29 (5) Dec 28 (4) Dec 27 (4) Dec 26 (6) Dec 25 (7) Dec 24 (4) Dec 23 (5) Dec 22 (10) Dec 21 (10) Dec 20 (6) Dec 19 (7) Dec 18 (8) Dec 17 (3) Dec 16 (9) Dec 15 (8) Dec 14 (10) Dec 13 (6) Dec 12 (10) Dec 11 (6) Dec 10 (7) Dec 09 (3) Dec 08 (5) Dec 07 (12) Dec 06 (10) Dec 05 (11) Dec 04 (6) Dec 03 (4) Dec 02 (9) Dec 01 (7) Nov 30 (9) Nov 29 (6) Nov 28 (5) Nov 27 (8) Nov 26 (6) Nov 25 (6) Nov 24 (10) Nov 23 (8) Nov 22 (10) Nov 21 (10) Nov 20 (7) Nov 19 (5) Nov 18 (7) Nov 17 (8) Nov 16 (14) Nov 15 (8) Nov 14 (9) Nov 13 (10) Nov 12 (7) Nov 11 (7) Nov 10 (10) Nov 09 (9) Nov 08 (7) Nov 07 (7) Nov 06 (6) Nov 05 (4) Nov 04 (6) Nov 03 (8) Nov 02 (8) Nov 01 (8) Oct 31 (7) Oct 30 (5) Oct 29 (6) Oct 28 (6) Oct 27 (8) Oct 26 (11) Oct 25 (7) Oct 24 (4) Oct 23 (8) Oct 22 (6) Oct 21 (8) Oct 20 (8) Oct 19 (5) Oct 18 (5) Oct 17 (4) Oct 16 (7) Oct 15 (5) Oct 14 (4) Oct 13 (5) Oct 12 (10) Oct 11 (9) Oct 10 (5) Oct 09 (1) Oct 08 (5) Oct 07 (7) Oct 06 (6) Oct 05 (7) Oct 04 (5) Oct 03 (6) Oct 02 (5) Oct 01 (6) Sep 30 (4) Sep 29 (5) Sep 28 (1) Sep 27 (5) Sep 26 (11) Sep 25 (6) Sep 24 (4) Sep 23 (8) Sep 22 (6) Sep 21 (5) Sep 20 (6) Sep 19 (5) Sep 18 (9) Sep 17 (8) Sep 16 (6) Sep 15 (7) Sep 14 (9) Sep 13 (9) Sep 12 (10) Sep 11 (9) Sep 10 (5) Sep 09 (8) Sep 08 (10) Sep 07 (8) Sep 06 (10) Sep 05 (4) Sep 04 (10) Sep 03 (7) Sep 02 (7) Sep 01 (7) Aug 31 (11) Aug 30 (8) Aug 29 (9) Aug 28 (10) Aug 27 (5) Aug 26 (3) Aug 25 (8) Aug 24 (8) Aug 23 (9) Aug 22 (8) Aug 21 (12) Aug 20 (8) Aug 19 (8) Aug 18 (10) Aug 17 (10) Aug 16 (10) Aug 15 (10) Aug 14 (12) Aug 13 (9) Aug 12 (9) Aug 11 (10) Aug 10 (13) Aug 09 (9) Aug 08 (13) Aug 07 (13) Aug 06 (3) Aug 05 (12) Aug 04 (11) Aug 03 (11) Aug 02 (10) Aug 01 (11) Jul 31 (11) Jul 30 (7) Jul 29 (9) Jul 28 (9) Jul 27 (10) Jul 26 (8) Jul 25 (10) Jul 24 (7) Jul 23 (6) Jul 22 (8) Jul 21 (10) Jul 20 (12) Jul 19 (6) Jul 18 (6) Jul 17 (8) Jul 16 (7) Jul 15 (10) Jul 14 (11) Jul 13 (12) Jul 12 (10) Jul 11 (8) Jul 10 (13) Jul 09 (1) Jul 08 (11) Jul 07 (9) Jul 06 (12) Jul 05 (9) Jul 04 (8) Jul 03 (7) Jul 02 (7) Jul 01 (7) Jun 30 (6) Jun 29 (8) Jun 28 (7) Jun 27 (11) Jun 26 (10) Jun 25 (10) Jun 24 (9) Jun 23 (13) Jun 22 (9) Jun 21 (9) Jun 20 (9) Jun 19 (10) Jun 18 (5) Jun 17 (12) Jun 16 (11) Jun 15 (14) Jun 14 (9) Jun 13 (13) Jun 12 (14) Jun 11 (10) Jun 10 (14) Jun 09 (10) Jun 08 (17) Jun 07 (10) Jun 06 (15) Jun 05 (11) Jun 04 (9) Jun 03 (11) Jun 02 (10) Jun 01 (16) May 31 (14) May 30 (13) May 29 (14) May 28 (9) May 27 (18) May 26 (16) May 25 (24) May 24 (10) May 23 (9) May 22 (16) May 21 (8) May 20 (9) May 19 (9) May 18 (10) May 17 (13) May 16 (12) May 15 (10) May 14 (8) May 13 (5) May 12 (10) May 11 (10) May 10 (14) May 09 (10) May 08 (7) May 07 (12) May 06 (6) May 05 (11) May 04 (14) May 03 (3) May 02 (13) May 01 (16) Apr 30 (7) Apr 29 (11) Apr 28 (10) Apr 27 (8) Apr 26 (11) Apr 25 (9) Apr 24 (7) Apr 23 (5) Apr 22 (8) Apr 21 (7) Apr 20 (10) Apr 19 (11) Apr 18 (9) Apr 17 (3) Apr 16 (5) Apr 15 (6) Apr 14 (7) Apr 13 (6) Apr 12 (12) Apr 11 (12) Apr 10 (11) Apr 09 (12) Apr 08 (11) Apr 07 (14) Apr 06 (12) Apr 05 (12) Apr 04 (13) Apr 03 (13) Apr 02 (8) Apr 01 (4) Mar 31 (8) Mar 30 (9) Mar 29 (12) Mar 28 (14) Mar 27 (20) Mar 26 (7) Mar 25 (14) Mar 24 (13) Mar 23 (15) Mar 22 (18) Mar 21 (12) Mar 20 (9) Mar 19 (9) Mar 18 (12) Mar 17 (11) Mar 16 (14) Mar 15 (9) Mar 14 (15) Mar 13 (17) Mar 12 (10) Mar 11 (15) Mar 10 (9) Mar 09 (13) Mar 08 (12) Mar 07 (11) Mar 06 (16) Mar 05 (9) Mar 04 (8) Mar 03 (12) Mar 02 (10) Mar 01 (6) Feb 28 (2) Feb 27 (4) Feb 26 (7) Feb 25 (3) Feb 24 (5)